D2 / D3 —- Ọtụtụ kpochapụwo kpochapụwo multi-rotor drone oblique igwefoto ụlọ ọrụ na ndị nrụpụta | Egwurugwu
Igwefoto izizi nke ụwa n'ime 1000g
A na-etinye RIY-D2 / D3 na ọnọdụ ndị nwere oke nkenke chọrọ dị ka 1: 500 teren / cadastral mmụba.D2 bụ nke ezubere maka multi-rotor UAV, nke na-anakọta data dị elu na ala dị elu iji zute ihe ziri ezi chọrọ nke oru ngo.
N'iji oghere nke Rainpoo mepụtara n'onwe ya, ihe oyiyi mbụ anakọtara doro anya na mma, na-enwu gbaa na agba, na-emegharị ihe oyiyi dị ala, na-adị nkọ ma na-agbasasị. Ihe omuma emeputara nwere uzo na nkuku doro anya, nke kariri ka uzo DLG.
D3 bụ ụdị nke D2 nke nwere ogologo ogologo oge, nke dabara adaba maka nchịkọta data na mpaghara nwere nnukwu topographic relif ma ọ bụ ụlọ elu.
Nha igwefoto 190 * 170 * 80mm
Ibu igwefoto 850g
Number nke pikselụ (Total) 120mp
Obere oge ikpughere oge 1s
Ntinye data SKYSCANNER (GPS)
Ikike icheta ihe 320g
Nkọwapụta data ≥70m / s
Ọnọdụ okpomọkụ -10 ℃ ~ 40 ℃